के तपाईंलाई आफ्नो जीवन व्यर्थ लाग्छ ?
Tue, Jun 19, 2018 | 17:59:05 NST
11:22 AM ( 1 year ago )
के तपाईंलाई आफ्नो जीवन व्यर्थ लाग्छ ? तपाईंलाई आफू एक्लै भएको महशुस हुन्छ ? त्यस्तो नसोच्नुस् । त्यसको उपाय छ ।
विश्व स्वास्थ्य दिवसको अवसर पारेर संसारभर नै उदासिनताको बारेमा कुरा गरौँ अभियान सुरु भएको छ । नेपालमा पनि सरकारले उदासिनता रोगको बारेमा जानकारी गराउन अभियान चलाएको छ । उदासिनता भए के गर्ने त ? स्वास्थ्य मन्त्रालयले निकालेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ : हतास हुने होइन, समाधान खोज्नुस् । सहयोग खोज्नुस् । तपाईंलाई जीउन कठिन भए जस्तो लाग्छ भने खुलेर कुरा गर्नुस् ।
उदासिनताका कारण तपार्इंलाई जीवन व्यर्थ भएको जस्तो लागेको हुन सक्छ । उदासिनता एउटा अवस्था हो । यसको उपचार सम्भव छ । हेरचाह, साथीभाइ परिवारको सहयोगले उदासिनता हटाउन मद्दत गर्दछ । तनावले उदासिनतालाई झन् जटिल मोडमा पु¥याउँछ । त्यसैले तनाव लिनु हुँदैन ।
तपाईंको आसपासमा उदासिनता भएका व्यक्तिलाई तपाईंले यसरी सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ
उनीहरुलाई सहयोग गर्ने विश्वास दिलाउनुहोस् ।
उनीहरुको कुराको लेखाजोखा नगरी कुरा सुन्नुहोस् ।
उदास हुनुको कारण पत्ता लगाउनुहोस् ।
उपचारका लागि तालिमप्राप्त व्यक्ति भेटाइदिने
उपचारमा लगि त्यहि अनुसार औषधि भए खान सहयोग गर्ने
नियमित खानपान र सुत्ने व्यवहारमा सहयोग गरिदिने ।
सकारात्मक कुरामा उनीहरुको ध्यान केन्द्रित गराउने ।
आशाहीन महशुस हुनु र बाँच्नुको अर्थ नदेख्नु उदासिनता हो । यस्तो सोच मनमा आएका बेला यो सोच्नु पर्छ की जिन्दगीका यस्तो हुनु तपाईं मात्र एक जना होइन । धेरै मानिस यस्तै जीवन भोगिरहेका छन् । साथीभाइसँग आत्महत्याका बारेमा कुरा गर्नुपर्दछ । यसले आत्महत्याको सोचबाट पछि हट्न सकिन्छ । विश्वमा आपसी सद्भाव र सहयोग तथा बेरोजगार अनि युद्धले गर्दा धेरै मानिस उदासिनतामा गएका छन् ।
तपार्इंका घर वरपर कुनै मानसिक सन्तुलन बिग्रिएर घरमै बाँधिएर बसेका छन् भने उनीहरुको बारेमा बोल्नुस् । सहयोग गर्नुस् । मानसिक असन्तुलन भए त्यसको उपचार हुन्छ भनेर उनीहरुको परिवारलाई बुझाउनुस् ।
यस्तै तपाईं आफैँलाई उदास भएको महशुस हुन्छ भने आफ्ना नजिकैका साथीलाई आफ्नो कुरा राख्नुस् । आफूलाई राम्रो लाग्ने क्रियाकलाप गरिरहनुस् । छोटो समयमा लागि हिँडडुल गरिरहनुस्, दैनिक व्यायाम गर्नुस् । नियमित खानपान र सुत्ने तालिका बनाउनुस् । जाँड रक्सी र चुरोट सुर्तीजन्य पदार्थबाट टाढै रहनुस् । आत्महत्या गर्ने जस्तो सोच आयो भने तुरुन्तै सहयोगका लागि नजिकका आफन्त तथा साथीसँग सम्पर्क गर्नुस् ।
शक्ति कम हुनु
खाने इच्छामा परिवर्तन
कम वा बढी सुत्नु
ध्यान केन्द्रित नहुनु,
शान्त बस्न नसक्नु
बेकार भएको महसुस गर्नु
आफूलाई दोषी ठान्नु वा आशाहीन हुनु, र आफूलाई चोट पुर्‍याउने वा आत्महत्या गर्ने सोच आउनु ।
उदासीनता जो कोहीलाई पनि हुनसक्छ । यो कमजोरीको चिन्ह होइन । उदासीनता रोगको उपचार थेरापी वा औषधी दुवै माध्यमबाट हुन्छ । उदासिनता बारे बेलैमा सोचे गम्भीर दुर्घटनाबाट बच्न सकिन्छ ।